समाचार::Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
तपाईंलाई थाहा छ, रक्सी सेवन गर्न छोड्नु भए के हुन्छ…
नयाँ वर्षमा धेरै मानिस आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्छ भन्ने ठान्छन् । स्वास्थ्य जीवनका लागि धेरैले रक्सी सेवन छोड्ने मानसिकता बनाउँछन् । यसको सिदै फाइदा खल्ती र स्वास्थ्यमा पुग्छ भन्ने आम मानिसको विश्वास छ । बेलायतको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा एनएचएसका अनुसार रक्सी सेवन घाउनु भयो भने यस्तो परिवर्तन आउँछ ः – बिहान उठ्दा सजिलो र आराम महसुस हुन्छ । – दिउँसो थकान कम लाग्छ । – आफूलाई सबैतिर अनुकूल भएको महसुस हुन्छ । – तौल घटेको वा त्योभन्दा नबढेको महसुस हुन्छ । यो परिवर्तन तपाईंले रक्सी सेवन गर्न कम गरेसँगै महसुस हुन्छ । यदि तपाईं लगातार रक्सी सेवन घटाउँदै वा छोड्दिनुभयो…
२५ हजार मतान्तरले चुनाव जित्छु : डा.शर्मा
मोरङ । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मोरङ ३ बाट नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार बनेका डा.सुनिलकुमार शर्मा यतिबेला चर्चाको शिखरमा छन् । विराटनगरको नोवेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. शर्मा अस्पतालबाट राजीनामा दिएर कांग्रेस उम्मेदवार बनेकाले पनि चर्चित बनेका हुन् । झण्डै डेढ महिना यता दैनिक ४ सय बढीलाई घरदैलोमा उपचार सेवा दिइरहेका डा.शर्मा एमालेको लालकिल्ला तोड्ने दावी गर्छन् । उनी भन्छन–म सँग नागरिकको सेवा गर्ने एजेण्डा छ । डा. शर्माले मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का सम्पूर्ण परिवारलाई ३ वर्ष…
आइतबार,२६ कार्तिक २०७४
कम्युनिष्टहरुले जिते सबै अधिकार गुम्ने खतरा: प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिष्टहरुले जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको र धार्मिक स्वतन्त्रताको घाटी निमोठ्न लागेको बताउनु भएको छ । कम्युनिष्टहरु धर्म र सस्कृति र परम्परा विरोधी भएकाले उनीहरुले भने जस्तो शासन आए नेपालको धार्मिक स्वतन्त्रता समाप्त हुने बताउनुभएको छ । नेपालका १६ औं विभूति तथा किराँत धर्मका प्रवर्तक फाल्गुनन्द लिङदेनको १ सय ३३ औं जन्म जयन्तिका अवसरमा पाँचथरको लब्रेकुटीमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले कम्युनिष्ट नेताहरुले भने जस्तो शासन आए…
चितवन । जिल्लालाई सुगम मानिए पनि धेरै क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्न बाँकी रहेको गैरआवासिय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदकी सचिव जानकी गुरुङले बताइन् । भरतपुर महानगरपालिकामा रहेको विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षाको सुविधा समेत नपुग्नु दुखद भएको बताउदै विकासका लागि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने औंल्याइन । भरतपुर १८ भुवनबस्तिमा रहेको श्री आधारभुत माध्यमिक विद्यालयलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण गर्दै सो कुरा बताइन् । चितवन सहायता कोष बेल्जियमको आयोजना तथा एनआरएन बेल्जियमको समन्वयमा सो विद्यालयलाई दुई थान डेस्कटप र एकथान ल्यापटप हस्तान्तरण गरिएको हो ।…
मंगलबार,७ कार्तिक २०७४
रिलेशनको तीज उत्सव सम्पन्न, ३ जनालाई नारी सम्मान
रत्ननगर । पुर्वी चितवनको मुटु सौराहा चोकमा रहेको रिलेशन एफएम ८८ मेगाहर्जले नारीहरुको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसरमा बृहत साँगितिक कार्यक्रम गरेको छ । माडि ज्वेलर्स रिलेशन तीज उत्सव २०७४ नाम दिइएको सो कार्यक्रममा चर्चित राष्टिय कलाकारहरु कोमल वलि, लक्ष्मी गौतम, साहिमा श्रेष्ठ, रोमा न्यौपाने, मञ्जु घिमिरे लगायतले रमाइलो प्रस्तुति दिए । पछिल्लो समय राजनितिमा समेत क्रियाशिल गायिका कोमल वलिको गायन र उर्जापुर्ण प्रस्तुतिमा दर्शक मज्जैले झुमे । उनका हरेक गीतमा दर्शकले वान्स मोर भन्दै चिच्याए । त्यस्तै रिलिजको लागि…
शनिबार,१० भाद्र २०७४
फुट्यो राप्रपा, कमलको भागमा १५
काठमाडौं । गत मंसिर ६ गते एक भएको राप्रपा आइतबार विभाजन भएको छ । पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल एकीकरण भई ३७ सिट सहितको राप्रपा गठन भएको थियो । त्यति वेला राप्रपासँग १२ र राप्रपा नेपालसँग २५ सांसद थिए । यतिबेला २२ सांसद लिएर राणाको टोली बाहिरिएको छ । कमल थापासँग अब १५ सांसद छन् । संविधानसभा निर्वाचन पछि चौथो ठूलो पार्टी रहेको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल अब सातौं ठूलो पार्टी बनेको छ ।…
आइतबार,२२ श्रावण २०७४
सेनाले सार्वजनिक ग-यो, तर अधुरै
काठमाडौं । नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषको सम्पत्ति ३९ अर्ब ५५ करोड पाँच लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा शान्ति स्थापनार्थ विश्वका विभिन्न मुलुकमा सहभागी भएबापत प्राप्त करिब एक करोड २४ लाखबाट २०३२ सालमा सैनिक कल्याणकारी कोषको स्थापना भएको थियो । सैनिक कल्याणकारी योजना निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी प्रदिपकुमार अधिकारीले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारीअनुसार २०७३ असार मसान्तसम्म ३३ अर्ब ६ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेकोमा २०७४ असार मसान्तसम्ममा एक अर्ब ५० करोड…
भोलि खण्डग्रास चन्द्रग्रहण
काठमाडौं । सोमबार राति खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएकाले सतर्क रहन ज्योतिषीहरूले आग्रह गरेका छन् । युवा ज्योतिषी दिवाकर पन्तका अनुसार चन्द्रग्रहण राति लाग्ने छ, तर यसको सुतक असर (सुतक) दिउँसो २ बजेर ७ मिनेटदेखि नै सुरु हुनेछ । ग्रहणको स्पर्श (सुरु) रातिको ११ बजेर ७ मिनेटमा हुनेछ । ग्रहणको मध्य, मध्यरात १२ बजेर ६ मिनेटमा हुनेछ । मोक्ष अर्थात् ग्रहणको अन्त्य रातको १ बजेर ४ मिनेटमा हुनेछ । ग्रहण १ घन्टा ५७ मिनेट लाग्नेछ । २३ गते दिउँसो २ बजेर…
नेपालगन्ज, बुटवल, घोराही र तुल्सीपुरमा कांग्रेस–एमालेको अवस्था कस्तो ?
काठमाडौं । ठूलो जनसंख्या, महत्वपूर्ण सहर तथा व्यापारिक केन्द्रहरू धेरै भएको र सुगमसमेत भएका कारण राजनीतिक दलहरूले अरु प्रदेशलाई भन्दा प्रदेश ५ लाई विशेष ध्यान दिएका छन् । प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तीनैवटा पार्टीले आफूले सबैभन्दा धेरै सिट जित्ने दाबी गरेको पनि प्रदेश ५ मै हो । यसका अलावा प्रदेश ५ मा मधेसी दलहरूको पनि राम्रो प्रभाव छ । केही पालिकामा राप्रपाले पनि आशा गरेको छ । प्रदेश ५ अन्तर्गतको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको र सबै…
‘मुख होइन, रुख हेरेर भोट दिनु’
नवलपरासी । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलले मुख र रुप नहेरी रुख हेरेर भोट दिन आग्रह गर्नुभएको छ । बर्दघाट नगरपालिका वार्ड नं १४ मा भएको पार्टी प्रवेश तथा घरदैलो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि पूर्व गृह राज्यमन्त्री समेत रहुनभएका कँडेलले बर्दघाट नगरपालिकामा मात्र नभइ नवलपरासीका ७ वटै स्थानीय तहमा नेपाली कांगेसको जित सुनिश्चित रहेको बताउनुभयो । विभिन्न राजनीतिक दलसंग आवद्ध र स्वतन्त्र सयौ कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउदै नेता कँडेलले बर्दघाट नगरवासीको हितका लागी हिजोदेखि आजसम्म निरन्तर लागिपरेको पार्टी…